Maxay Ahayd Sababtii Roosaha loo siiyey Jose Mourinho +Sawiro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Maxay Ahayd Sababtii Roosaha loo siiyey Jose Mourinho +Sawiro
Macalinka Manchester United Jose Mourinho ayaa Wajahaya dhibaato cusub ka dib Markii Xiriirka kubada Cagta England ee FA ay sheegeen in dacwad lagu soo oogi doono Mourinho lagana yaabo in lasaaro Ganaax adag.
Jose Mourinho ayaa laga Cayriyey Goobta Macalimiintu istaagaan qaybta labaad ee Cayaarta kadib markii uu Tunelka laga baxo kula doodey kuna Aflagaadeeyey Garsoore Mark Clattenburg isaga oo u sheegay Garsooraha in uu ka diiday Rigoore isla Markaana uu Kooxdiisa ka eexday.
Mark Clattenburg ayaa Markii lasoo laabanyey qaaybta labaad waxa uu ku amray Jose Mourinho uu Fuulo Tarabuunka isla Markaana uusan istaagin halkii loogu tala galay ee uu Taagnaa.
Xiriirka FA ga ayaa lacadeeyey in ay Sugayaan Warbixinta Garsoore Mark Clattenburg uu ka soo qoro Jose Mourinho Waxaana lasii qiyaasayaa in laganaaxi doono Macalinka Man United kulamo badana loona diidi doono in uu Garoomada yimaado taas oo dhibaato Culus ku noqon doonta Kooxdaan oo hadaba kujirtya Xaalad aad u qalafsan.
Mourinho ayaa ku doodaya in Garsooraha Cayaartu iska indho tiray Rigoore lagu Galay daafaciisa Matteo Darmian markii uu qalad ku galay John Flanagan oo Burnley u dheelayey Waxaana uu aad u dhaleeceeyey Garsoore Mark Clattenburg markii laga sii baxayey Garoonka qaybta koowaad ee Cayaarta,
Hogaamiyaha Manchester United ayaa waxaa Horay ugu Taalay dacwad kale oo ku saabsan Weerar uu ku qaaday Garsoorihii kulankii Liverpool uu ladheeley Anthony Taylor kulankaas oo dhacay 17 kii bishaan,